Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federalka Somaliya ayaa maanta ku dagaalamay Duleedka Degmada Cadaado – STAR FM SOMALIA
Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federalka Somaliya ayaa maanta ku dagaalamay Duleedka Degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, sida ay soo sheegayaan Suxufiyiinta ku sugan Magaalada Cadaado.
Sababta dagaalka ciidanka dhexmaray ka dambeysay, ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan, iyadoo Wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada ay ku dagaalameen arimo ku aadan qaybsiga Raashin ciidanka loo geeyay, halka wararka qaarna ay sheegayaan inay ku dagaalameen ciidamada lacag loo qaybinaayay.
Ciidanka dagaalamay ayaa ka wada tirsan guutada 21-aad ee Ciidanka Xooga dalka Somaliya ee ku sugan duleedka Degmada Cadaado, waxaana durbadiiba ku baxay oo kala dhexgalay ciidamo ka tirsan kuwa Nabad Suggida Galmudug.
Suxufiyiinta ayaa soo sheegaya dagaalkaasi inuu ka dhashay Khasaare dhaawac ah oo gaaraya ilaa 3 Askari oo dagaalka ku dhaawacantay, inkastoo aanan la xaqiijin karin inay jirto dhimasho iyo in kale.
Saraakiisha Ciidamada 21-aad ee ciidanka Xooga dalka Somaliyed weli kama aysan hadlin dagaalkaan maanta ciidanka dhexmaray, inkastoo hada ay socoto xalinta dhibaatada maanta dhacday.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug oo aan la xiriirnay, ayaa inoo sheegay inay ku mashquulsan yihiin xalinta dagaalka ciidanka dhexmaray, laakiin hada xaalada ay tahay mid caadi ah.
Qayb ka mid ah ciidamada 21-aad ayaa fariisin ku leh Duleedka Degmada Cadaado, halka qaar kale oo ciidankaan ka tirsan ay ku sugan yihiin Degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud.